Petunia | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Fianakaviana mitombo ao an-trano
Ny ankamaroan'ny tia ny zavamaniry any an-trano dia mahatsapa ireo petunias tsy mendrika. Matetika izy io no hita ao amin'ny valan-javaboary, efamira, hita eny amin'ny balconies sy loggias. Amin'ny habakabaka, matetika dia mamboly petunia tsotra. Ny varim-pireneny amin'ny alàlan'ny rivotra na orana dia mihodina haingana ary very ny hatsaran-tarehiny. Mora atao ny petunia mitombo ao an-trano ary mikarakara azy, fa mila manaraka fitsipika vitsivitsy ianao.
Petunia sekretera ara-tsakafo: fomba hanomezana sakafo zavamaniry iray ho an'ny voninkazo be dia be
Amin'ny lohataona sy ny fahavaratra, te-hampifaly ny masonao amin'ny zavatra tsara tarehy ianao, manamboatra ny tokotaninao, balkonina ary varavarankely misy voninkazo, mamorona fiononana manodidina anao ary mankafy ny hatsarana. Misy karazana voankazo maro be. Afaka mampitombo azy ireo ianao na mividy entana amin'ny vilany. Ny toerana voalohany amin'ny fahasamihafana, ny palette manankarena sy ny hatsaranao dia petunia.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Petunia